Namni kun eenyu? Lammaa Magarsaafi ABiy Ahmed nama dukkana keessaatti gatanidha. Hiriyoota lamaan isaanii ture! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNamni kun eenyu? Lammaa Magarsaafi ABiy Ahmed nama dukkana keessaatti gatanidha. Hiriyoota lamaan isaanii ture!
Namni kun eenyu? Lammaa Magarsaafi ABiy Ahmed nama dukkana keessaatti gatanidha. Hiriyoota lamaan isaanii ture. Sabboonummaanillee lameenshee caala ture. Garuu eenyu namni kun?